၅.၈” x ၈.၂” | စာမျက်နှာ ၂၄၀ | စက္ကူဖြူ အချော
ရောင်းစျေး - ၆၀၀၀ ကျပ်
ယူကရိန်းမှာ ငတ်မွတ်သွားတဲ့ အင်တာနက်ကို
ကမ္ဘာပတ်လမ်းအနိမ့်ပိုင်းရှိ Starlink ဂြိုဟ်တုဖြင့်
ပြန်ရအောင် လုပ်ပေးသူ #အီလွန်မတ်စ်
၂၀၂၁ အောက်တိုဘာတွင် Tesla လျှပ်စစ်ကား ကုမ္ပဏီကို
ဒေါ်လာ ၁ ထရီလီယံကျော်ဖြင့် တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးအထိ စွမ်းဆောင်ပေးသူ #အီလွန်မတ်စ်
လူသားများအတွက် အင်္ဂါဂြိုဟ်တွင် ဒုတိယအိမ် တည်ရန်
တီထွင်ကြံစည် ဖော်ဆောင်နေတဲ့ အချမ်းသာဆုံး၊ အထင်ရှားဆုံး
၂၀၂၁-၂၀၂၂ နှစ် ပုဂ္ဂိုလ်ကျော် #အီလွန်မတ်စ်
စိတ်ဝင်စားဖွယ် ခပ်ဆန်းဆန်း လူတစ်ယောက်ရဲ့
နိမ့်မြင့် ထွင်းဖောက် ဆုတ်တက် လှုပ်ရှား များကို
မွှေနှောက်ယှက်ခြယ်၍ သီးသန့်ဟန် ပြုစုထားပါသည်
???? ယူကရိန်း-ရုရှားစစ်ပွဲမှာ ယူကရိန်းတွေကို အမေရိကန်ဘီလျံနာ အီလွန်မတ်စ်ရဲ့ လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Starlink ကနေ ဂြိုဟ်တုအင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု ပေးရာက.. ရုရှားတွေနဲ့ အီလွန်မတ်စ် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အပြန်အလှန် သရော်လှောင်ပြောင်ကြတာတွေ လူသိများလာခဲ့ပါတယ်။
???? အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့် အာကာသထဲက နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်း ISS ကို ရုရှားဒုံးပျံတွေနဲ့ ဆက်ပြီး အကူအညီ မပေးတော့ဘူး၊ အမေရိကန်တွေ အာကာသဆက်သွားချင်ရင် တံမြက်စည်းရိုးသာစီးကြလို့ ရုရှားအာကာသအေဂျင်စီအကြီးအကဲက လှောင်ပြောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို အီလွန်မတ်စ်က သူဦးဆောင်တဲ့ SpaceX က ဒုံးပျံတစ်စင်း လွှတ်တင်တဲ့နေ့မှာ “အမေရိကန်တံမြက်စည်းပျံ လာပြီ” လို့ ရေးတင်ပြီး တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
???? တကယ်တော့ ရုရှားတွေနဲ့ အီလွန်မတ်စ်အကြားမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုလောက်ထဲက ခါးသီးတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
အီလွန်မတ်စ်ဟာ ရုရှားလုပ် ဒုံးပျံအဟောင်းဝယ်ဖို့ မော်စကိုသို့ ၂၀၀၁ ခုနှစ်က သွားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အီလွန်မတ်စ် အရည်အချင်းကို မသိတဲ့ ရုရှားတွေက သူ့ကို ကောင်းကောင်းမဆက်ဆံခဲ့ဘူး။ သူတို့ဒုံးပျံအဟောင်းကိုတောင် အီလွန်မတ်စ် ဝယ်နိုင်မယ်လို့ မထင်ဘဲ အထင်သေး အမြင်သေး ဆက်ဆံခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် စိတ်တိုပြီး မော်စကိုကအပြန် လေယာဉ်ပေါ်မှာတင် အီလွန်မတ်စ်ဟာ ကိုယ်ပိုင်ဒုံးပျံအသစ် တည်ဆောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၂၀၀၂ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်မှာ SpaceX ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခဲ့ပြီး အခက်အခဲတွေ အမျိုးမျိုးကြားက အောင်မြင်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
???? နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်း ISS ကိုသွားဖို့ ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ နည်းပညာအရ အမေရိကန်အာကာသယာဉ်မှူးတွေကအစ ရုရှားဒုံးပျံတွေကိုချည်း အားကိုးခဲ့ရတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခု တကယ် ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အီလွန်မတ်စ်ရဲ့ SpaceX ဒုံးပျံတွေ အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းလာချိန်မှာတော့ အရာအားလုံး ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။
SpaceX က လွတ်တင်ခဲ့တဲ့ Crew Dragon အာကာသယာဉ်ဟာ နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်း ISS နဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ ပထမဆုံးပုဂ္ဂလိက အာကာသယာဉ် ဖြစ်ပါတယ်။
အခု ရုရှားဘက်က သူတို့ပြန်ပို့မပေးရင် မြေပေါ် ပြန်မရောက်နိုင်သယောင်ယောင် ပြောနေကြတဲ့ ISS ပေါ်က အမေရိကန်အာကာသယာဉ်မှူးဆိုတာ Crew Dragon နဲ့ ပို့ထားတာပါ။ ဒါကြောင့် ရုရှားတွေ တကယ် ပြန်ပို့မပေးလည်း အီလွန်မတ်စ်က Crew Dragon ကို ထပ်လွှတ်ပြီး သွားခေါ်နိုင်ပါတယ်။
???? အခုဆို ဒုံးပျံတစ်စင်းလွှတ်တင်မှုဟာ SpaceX အတွက် ထမင်းစားရေသောက် ဖြစ်နေပါပြီ။ တကယ်တော့ နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်း ISS ဆီ သွားဖို့လောက်က အီလွန်မတ်စ်အတွက် အနိမ့်ဆုံး အာကာသ လှေကားထစ်ပါ။ လကမ္ဘာဆီ ပြန်သွားဖို့ဆိုတာတောင်မှ NASA က တာဝန်ပေးလို့သာ လုပ်ရမှာပါ။ သူ့ အန္တိမရည်မှန်းချက်က ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတွေအတွက် နောက်ထပ် ရှင်သန်နေထိုင်စရာ ကမ္ဘာသစ်အဖြစ် ရွေးချယ်ထားတဲ့ ဂြိုဟ်နီကြီးခေါ် အင်္ဂါဂြိုဟ်ဆီ သွားဖို့ပါပဲ။
???? ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုကို လက်တွေ့ဖန်တီးဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ သူ့အကြောင်း သေသေချာချာလေး သိချင်ရင်တော့ … …. …
#ကိုလတ်စာပေ 09 5020068
#လင်းသစ်ပြည်စာပေ 09 771 048401
Linn Thit Pyi လင်းသစ်ပြည် စာပေ
* ၅.၈” x ၈.၂” | စာမျက်နှာ ၂၄၀ | စက္ကူဖြူ အချော
* ရောင်းစျေး - ၆၀၀၀ ကျပ်
* 18-03-2022 နေ့ စတင် ဖြန့် ပါ ပြီ ၊ စာအုပ်ဆိုင်များသို့ ရောက်ပါပြီ။
#မြေပြင်စာအုပ်ဆိုင်များ နဲ့ #online_book_shop များမှာ ရနိုင်ပါပြီ
#လင်းသစ်ပြည်စာပေ 09 771 048401, 09 450 827699 က ထုတ်လုပ်ပြီး
#ကိုလတ် စာပေ 09 50 200 68 မှ ဖြန့်ချိပါမယ်။
09 5020068, 09 5093938, 01-240981
အမှတ်(၂၀၀) ၃၁ လမ်း(အထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Ko Latt Book Shop 095020068 (fb)
09 771 048401, 09 450827699,
အမှတ်(၉၁၉) ၁၉ လမ်း ၇ ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
အပြည့်အစုံ ပေးပို့၍ မှာကြားနိုင်ပါပြီ။
*နယ်မြို့များမှ အမှာများကို စာတိုက်မှတစ်ဆင့် ပို့ပေးမည်ဖြစ်၍
စာဝေ စာပို့ဝန်ဆောင်မှု အဆက်အခဲရှိသည့်အတွက် စာတိုက်တွင် သွားရောက်
အနီးဆုံး စာတိုက်ကို ထည့်ပေးပါရန် အနူးအညွတ် ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
*ရန်ကုန်မြို့တွင်း အမှာများကို အိမ်တိုင်ရာရောက် ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Kay Zaw Thin , Linn Thit Pyi